कोरोना पुष्टि भएपछि सम्पर्कविहीन
२०७७ श्रावण २१ बुधबार २१:०७:००
बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा कोरोना परीक्षण गराएका व्यक्तिहरू कोरोना पोजेटिभ रिपोर्ट आएपछि स्वास्थ्य निकायको सम्पर्कमै नरहने क्रम बढ्न थालेको छ । गत शनिबार बुटवल हाटबजारमा व्यापार गर्ने दुईजनामा कोरोना पुष्टि भएलगत्तै बेपत्ता भएका थिए भने बुधबार पनि यसैगरी एकजना संक्रमित सम्पर्कविहीन भएका छन् ।
सिद्धार्थ नगरपालिका– ८ भैरहवा ठेगाना लेखाएका २८ वर्षीय पुरुष सम्पर्कविहीन भएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. विष्णु गौतमले बताए । उनमा कोरोना पुष्टि भएपछि स्वास्थ्य संस्थाबाट सम्पर्क गर्दा सम्पर्क नै हुन नसकेको डा. गौतमले बताए ।
हाटबजारका दुईजना सम्पर्कविहीन
यसअघि गत शनिबारबाट हाटबजारमा व्यापार गर्ने दुईजना पुरुष कोरोना पुष्टि भएपछि सम्पर्कविहीन भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशिक अस्पतालमा कोरोना जाँच गराएका उनीहरूलाई फोनमार्फत जानकारी गराइएको थियो । फोनबाट जानकारी लिएपछि उनीहरूले मोबाइल नै ‘स्विच्ड अफ’ गरेको स्वास्थ्यकर्मीहरूको भनाइ छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य अधिकृत कुन्दनकुमार सिंहका अनुसार ४६ र २७ वर्षीय उनीहरू बुटवल–५ स्थित घरमा डेरा गरेर बस्थे । उनीहरूले ठेगाना भैरहवा बताए पनि कुन ठाउँका स्थायी बासिन्दा हुन् भन्ने स्पष्ट पारेका थिएनन् ।
#लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल # कोरोना
कर्णाली प्रदेशमा थप ३७ जनामा कोरोना संक्रमण
धरानमा कोरोना संक्रमणबाट दुई महिलाको निधन
विकसित मुलुकमै पनि कोरोना संक्रमितमाथि चर्को विभेद
विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या तीन करोड १२ लाख नाघ्यो, दुई करोड २८ लाख निको भए